မလေးရှားရောက် မြန်မာ ၁၇ ဦး မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့
မလေးရှားရောက် မြန်မာ ၁၇ ဦး မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်...
24 พ.ค. 2563 - 21:44 น.
မြန်မာနိုင်ငံ က၁၇ ဦးတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမလေးရှားဘက် ကထုတ်ပြန်တာမှန်ကြောင်းနဲ့ သူတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ သားတွ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို စိစစ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးက သံရုံးအုပ် ဦးနိုင်မင်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာ ၁၇ ဦးဟာ မလေးရှားနိုင်ငံဘူကစ်ဂျာလီကမ့် ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း ကဖြစ်တယ်လို့လည်း ကိုအိုက်လွင်ကပြောပါတယ်။
မလေးရှားက ပြန်လာသူတွေထဲ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတယ် လို့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ကြေညာချက်တွေကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံက အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက တရားမဝင် နေထိုင်သူတွေကို မလေးရှားအစိုးရက ပြန်မပို့ခင် ဆေးစစ်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အခုရက်ပိုင်း မလေးရှားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြန်တော်ပြန်မယ့် လူတွေကို ဆေးစစ်နေပြီလို့ မလေးရှားမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ Alliance of Chin Refugees က ကိုအိုက်လွင်က လည်း ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
မလေးရှားကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့ ပြန်ပို့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲက ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါပိုး တွေ့ရှိတာ ခုဆိုရင် ၁၁ ဦးရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စစ် ရောဂါပိုးတွေ့သူ ၂၀၁ ဦးရှိပြီး နောက်တိုးလူနာ အမှတ် ၂၀၀ နဲ့ ၂၀၁ တို့ဟာလည် မလေးရှားနိုင်ငံက ပြန်လာသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
မေလ ၂၀ရက်နေ့ က မလေးရှား မြန်မာသံရုံး အစီစဥ်နဲလူ တစ်ရာကျော်လောက် ရန်ကုန်ကို ထပ်ပြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
အရင် အခေါက်တွေက ပြန်ဝင်လာသူတွေမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးတွေ့တာတွေ ရှိလို့ဒီတစ်ခေါက်ဝင်လာသူတွေကို အစိုးရက သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတွေမှာ ကွာရန်တင်းဝင်ခိုင်းပြီး ရောဂါပိုးရှိ မရှိ စိစစ်ပြီးမှ ပြန်လွှတ်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို ရောက်ပြီး ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါကြောင့် ပိတ်မိသူတွေကို ပြန်ခေါ်ဖို့ မြန်မာအစိုးရက ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ် Relief Flight တွေကို မေလ ၁ ရက်နေ့ကနေ စတင်ပြီး စေလွှတ်ခဲ့ပြီး လာမယ့်မေလ နောက်ဆုံးပတ်အထဲမှာ မလေးရှားကနေ ရန်ကုန်ကို ထပ်မံပြေးဆွဲဖိုူ့စီစဥ်နေကြပါတယ်။
ဒီလို ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်တွေနဲ့ ပြန်လာသူတွေထဲမှာ ထိုင်း ၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ ၊ ဂျပန်နဲ့ ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွေကလည်းပါဝင်ပါတယ်။
" တရားမဝင်နေထိုင်လို့ ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေကို ကမ့်ကနေ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကို အမြန်ဆုံး ပြန်ပို့ နိုင်အောင် စီစဥ်တဲ့အခါ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးဖို့ အန်ဂျီအိုတွေက တောင်းဆိုတော့ မလေးရှားအစိုးရက ကမ့်နှစ်ခုကို စစ်ဆေးတယ်။ အဲဒီမယ် မေလ ၂၁ရက်နေ့က သူတို့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဘူကစ်ဂျာလီကမ့်မှာ မြန်မာ ၁၇ ဦး အပါအဝင် နိုင်ငံခြားသား ၆၀ ကို ကိုဗစ် ပေါ့စ်တစ်အဖြစ်တွေ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်တယ်။ စမုန်ညှင်းကမ့်မှာတော့ နိုင်ငံခြားသား ၂၁ ဦး တွေ့တယ် " လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
မလေးရှားအစိုးရက ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး အမိန့်ကို မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့က ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ အထိ ထပ်တိုးထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ မလေးရှားရောက် မြန်မာတွေက ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိ မလေးရှားက မြန်မာသံရုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ဖို့ စာရင်းပေးထားကာ စောင့်ဆိုင်းနေသူတွေ ၅၀၀ ကျော်ရှိကာ မြန်မာအစိုးရဆီကို စာတင်ထားတယ်လို့ မလေးရှားနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးက သံရုံးအုပ် ဦးနိုင်မင်း က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မလေးရှားရောက် မြန်မာ ၁၇ ဦး မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့